Izakhono ezithambileyo: Zintoni? Zeziphi ezona zixatyiswa kakhulu? | Bezzia
Izakhono ezithambileyo: Zintoni? Zeziphi ezona zixatyiswa kakhulu?
UMaria vazquez | 10/11/2021 10:00 | Umfazi ophetheyo
Kwiinyanga ezidlulileyo sicebise iBezzia eyahlukileyo iinethiwekhi zentlalo ezinobungcali apho siye sakukhuthaza ukuba wenze iprofayili ukuze uqinise ubudlelwane kunye ukufumana amathuba emisebenzi. Ukuba uyenzile kwi-Linkedin ngoko uya kukwazi ukuba sithetha ntoni xa sithetha ngezakhono.
I-Linkedin ikhuthaza ukuba ugqibezele iprofayile yakho ukubandakanya izakhono ezithambileyo. Kodwa uthetha ukuthini ngala magama? Kwaye yintoni ebaluleke nangakumbi, ngaba uyazi ukuba zeziphi ezona zifunwa kakhulu kwaye ke ngoko kuya kuba nomdla ukwazi ukongeza kwiprofayile yakho kule kunye nezinye iinethiwekhi zentlalo yoluntu?
Kwinkalo yobungcali, ulwazi kunye namava zibalulekile ukuze ufumane umsebenzi kwaye ukwazi ukuwuphuhlisa. Kodwa ke izakhono ezinqamlezileyo, ezo wena njengomsebenzi unokuba negalelo kumaqela omsebenzi.
1 Yintoni izakhono ezithambileyo?
2 Zeziphi ezona zifunwa kakhulu?
3 Sibhekisela njani kwezi?
Yintoni izakhono ezithambileyo?
Kwilizwe lomsebenzi, siva igama elithi 'izakhono' rhoqo nangakumbi, okanye ukucacisa ngakumbi 'izakhono ezithambileyo' esinokuthi ngeSpanish siziguqule njengezakhono ezithambileyo kwaye ezibhekisa ku. izakhono zentlalo umntu azifumana kubomi bemihla ngemihla kwaye oko kuvumela abantu ukuba bahlangane ngempumelelo kwiindawo zokusebenza.
Ngamanye amazwi, izakhono zentlalo, unxibelelwano kunye nolwimi ekufuneka ujongane nobomi bakho bobuqu kunye nobungcali. Izakhono ezibumbeneyo, ubukhulu becala, ubuntu bakho kwaye, nangona bengenakubekwa tyala njengezakhono ezinzima, zinokukwenza ugqame malunga nabanye abaviwa.
Izakhono ezithambileyo inokwahlulwa ibe ngamacandelo amathathu: izakhono zokusebenzisana nabantu, izakhono zentlalo kunye nezakhono zendlela yokusebenza. Iindidi eziphendula le mibuzo ilandelayo: Usebenza njani njengomntu ozimeleyo?Usebenza njani njengomntu ekuhlaleni? Yaye ujamelana njani nocelomngeni?
Zeziphi ezona zifunwa kakhulu?
Izakhono ezithambileyo ziqala ukudlala indima ephambili kwi iinkqubo zokukhetha, ngakumbi kumacandelo athile kunye neemarike apho zinokukwenza ugqame kubudlelwane bakho noogxa bakho kunye nabaxumi. Kodwa, zeziphi ezona zakhono zifunwa kakhulu?
Ngokwezifundo ezenziwa ziinethiwekhi zentlalo yobuchwephesha, ukuthatha isigqibo ebusweni beengxaki ezinokubakho, ukuba nokucinga okuphangaleleyo kunye nezakhono zonxibelelwano kuya kuba phakathi kwezona zakhono zifunwa kakhulu. I-Linkedin, iya phambili kwaye ikhomba ezintathu iindawo eziphambili njengeyona ikhangelwe kakhulu:
Ukusonjululwa kwengxaki, ukucinga okunzulu, ukusungula izinto ezintsha kunye nokuyila.
Ukukwazi ukujongana nobunzima kunye nokungaqondakali.
Ukuba uyakwazi ukuphuhlisa izakhono ezinxulumene nale mimandla, uya kuba nethuba lokugqama. Ziyimfuneko kwaye zixatyiswe kwiindawo zoshishino kwaye ziguqulelwe kwizakhono ezithile ezifana nezo zikuluhlu olulandelayo ezinokukukhokela kwaye zikuncede uzibize ngamagama.
Sibhekisela njani kwezi?
Sinokuziva sivaliwe xa kuziwa chaza izakhono zethu okanye ukubhekisa kwezi kwikharityhulam yethu kwiintanethi zentlalo. Siqhele ukudwelisa izifundo ezahlukeneyo kunye namava, kodwa hayi ezona zakhono zithambileyo zinzima ukuziveza.
Dwelisa uluhlu olukhulu lwezakhono Kusenokuhenda, kodwa kulumkele ukongeza izakhono ongazifanelanga kuluhlu. Nangona zingenakho ukuboniswa ngesatifikethi, zombini kuluhlu lwezinto ezinomdla kwi-resume yakho, njengoko kwileta yakho yenkuthazo yokuba ngumgqatswa kunye nodliwano-ndlebe lwexesha elizayo, banokubizelwa umbuzo.
yiba krelekrele xa ufaka izakhono kwiprofayile yakho okanye uqalise kwakhona. Gxininisa kwiimpawu zomsebenzi owufunayo kwaye ukhethe ezo zakhono unazo kwaye zigqame kuloo msebenzi ukhethekileyo. Ezinye izikhundla zifuna ukuba ujongane nomceli mngeni omtsha ngokwakho yonke imihla, ngoko ke izakhono ezinjengokuzimela okanye ukomelela zibalulekile. Kwabanye, kwelinye icala, ukusebenza kweqela kuyaphumelela, ngoko kunokubaluleka ngakumbi ukuba nobukrelekrele beemvakalelo kunye nezakhono zokunxibelelana.
Ukuba neseti eqinileyo yezakhono ezithambileyo yinto ebaluleke kakhulu namhlanje kuwo nawuphi na umsebenzi. Ke cinga ukuba zeziphi ezo zibalaseleyo kuwe kwaye ungalibali ukuzibandakanya ngendlela enye okanye enye, nokuba kukuqhubeka kwakho, ileta, okanye udliwanondlebe olubhaliweyo okanye oluthethiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Umfazi ophetheyo » Izakhono ezithambileyo: Zintoni? Zeziphi ezona zixatyiswa kakhulu?
Indlela yokulwa nobuso obomileyo
Ezi ziintlanzi kunye noonokrwece abaqulethe eyona mercury